India - Njem nlegharị anya na njem Kazakhstan: Gịnị bụ nkwekọrịta ahụ?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Kazakhstan na -agbasa » India - Njem nlegharị anya na njem Kazakhstan: Gịnị bụ nkwekọrịta ahụ?
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • Akụkọ Kazakhstan na -agbasa • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Njem na njem nlegharị anya India na Kazakhstan
Ndị otu njem njem nke India (TAAI) na Kazakhstan Tourism abanyela Memorandum of Understanding (MOU) taa, Tuzdee, Ọgọst 10, 2021. Ndị bịanyere aka n'akwụkwọ a bụ Oriakụ Jyoti Mayal, Onye isi ala, TAAI, na Maazi Kairat Sadvakassov, Onye isi oche. nke Board of Kazakhstan Tourism.
Nkwalite njem nlegharị anya nke India na Kazakhstan ga -agụnye enyemaka nke abụọ na nhazi mmemme, webinars, ihe ngosi azụmaahịa na mmemme ọzụzụ.
Ndị otu TAAI ga -enwe ihe ngosi nwere akụkụ mbata na MICE nke ndị na -eme njem nlegharị anya na ndị njem Kazakhstan.
Ndị njem n'ọtụtụ ọdụ ụgbọ elu Kazakhstan ga -enyocha koodu QR pụrụ iche iji chọpụta na ahụike ha nọ na ọkwa “Green” - ule PCR na -adịghị mma ma ọ bụ paspọtụ ịgba ọgwụ mgbochi.
MOU a na -achọ ịkwalite mmasị na ndị mbata njem nleta n'etiti Kazakhstan na India site na imekọ ihe ọnụ na mmekọrịta mmekorita yana site na mgbanwe mgbanwe.
Nkwalite ngwaahịa njem nlegharị anya ga -agụnye enyemaka nke abụọ na ịhazi mmemme na igosipụta ike njem nke mba abụọ ahụ n'oge mmemme azụmaahịa na mmemme ọzụzụ na webinars site na ndị otu 2 TAAI na India.
Ndị otu TAAI ga -enweta ohere igosi “India dị ịtụnanya” n'akụkụ mbata na MICE maka ndị na -eme njem nlegharị anya na ndị njem Kazakhstan.
Emere emume a site na ọnụnọ ndị nnọchi anya TAAI bụ Maazị Jay Bhatia, osote onye isi ala; Maazị Bettaiah Lokesh, onye odeakwụkwọ ukwu nke asọpụrụ; Maazị Shreeram Patel, Hon. Onye na -edebe ego; Maazị Anoop Kanuga, Onye isi oche ndị njem nlegharị anya; na Dr. Himanshu Talwar, onye isi oche (TAAI). Site na Njem nlegharị anya Kazakhstan Ngalaba bụ Maazị Daniyel Serzhanuly, Director MICE Tourism, na Maazị Galimzhan Seilov, onye isi njikwa, Njem nleta.
Ndị nnọchite anya akụkụ abụọ ahụ kelere ma kelee ibe ha ma nyekwa ndetu nke nnukwu nkwa ha maka uto na mmepe nke njem nlegharị anya n'etiti India na Kazakhstan.